FiNN FLARE nke ụmụ ọhụrụ na-esite mmiri-okpomọkụ
Finnish ika FiNN FLARE gosipụtara nke abụọ oge nchịkọta ụmụaka. Ekike mara mma maka ụmụ nwoke na ụmụ agbọghọ bụ akụkụ nke nchịkọta mmiri-okpomọkụ nke ika. Ebube na-egbuke egbuke, ndị na-edepụta ihe, ndị edemede edemede pụrụ iche - ihe niile a na-emetụta na nke mbụ nke mmiri-okpomọkụ maka ụmụ site na 6 afọ.
Mmetụta dị iche iche na ụdị
Ndị ọlụlụ na ndị nna ga-enwe obi ụtọ ịmara na e meela ụfọdụ ndị okenye na-emegharị maka ihe ndị na-edozi ụmụaka, ya mere ezinụlọ nile nwere ike ịchọta ụdị ọ bụla: jeans maka nwa na nna nke otu ụdị na agba, uwe maka nwa gị na maka nne nwere ihe ịchọ mma ọ bụla. N'otu oge ahụ, enwere nnukwu nchịkọta nwebisiinka na anụ ahụ, nke e kere n'otu n'otu maka nchịkọta ụmụaka.
Teknụzụ ọhụrụ maka ụmụaka
Tụkwasị na nke ahụ, uwe FiNN FLARE jupụtara na teknụzụ: antibacterial impregnation of lining, atọ akwa oyi akwa insulators na ogige ntụrụndụ, ihe ndị na-ere mmiri nke mkpuchi elu, obere "ume ume" n'oge okpomọkụ na ha jikọrọ - niile a ga-enye nkasi obi na uwe na mma na nlekọta nke ihe. Ntụkọta ụmụ ọhụrụ FiNN FLARE - maka obere ụmụaka mods!
Uwe mgbede chic 2014
Uwe Nkume Ụmụaka 2014
Ụdị ejiji Fall 2013
Kedu ihe ga-adị mma n'oge okpomọkụ nke afọ 2014?
Uwe Akpado Uzo 2013
Pants - Mmiri-Summer 2014
Flip-flops maka ngụsị akwụkwọ 2014
Ọkpụkpụ Lilac - echiche na-egbukepụ egbukepụ na echiche dị nro
Mee aka na kamifubuki
Slimming na herbs - 25 n'arọ kwa ọnwa
Acacia mmanụ aṅụ - uzommeputa
Egwurugwu e ji osisi oak mee
Ndacha ala maka akwarium na aka aka ha
Ọ nwere ike inwe mmekọahụ mgbe ị na-ahụ nsọ?
Ogo nke ikpu
Aha maka azụ
Ihe kacha mma maka onye ị hụrụ n'anya: Kylie Jenner zụtara ụgbọala ọhụrụ maka ụbọchị ọmụmụ ya
Ntak emi ọkpụkpụ aka ekpe ekpe?
Gịnị na-azọ ụkwụ?
Kedu ka ị ga-esi na-ekere òkè n'ụgbọala mmega?
Eji nkịta: ihe ị ga-eme?
Ngwa "Fairy Bird"
Ofe gazpacho - uzom kacha mma
Crafts maka ụmụaka nke afọ abụọ
Kedu ihe iji mee Capri?
Ụgbọ njem na Malta